U-Divock Origi Ubuntwana Bombhalo Plus Untold Biography Facts
Ikhaya IZITOLO ZE-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola laseBelgian U-Divock Origi Ubuntwana Bombhalo Plus Untold Biography Facts
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola leGhola elibizwa ngokuthi "Origi". Indaba yethu ye-Divock Origi yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti egcwele yezenzakalo eziphawulekayo kusukela ngesikhathi sokubuntana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela isizinda somndeni wakhe, indaba yokuphila ngaphambi kokudumo, ukuphakama kwendabuko, ubuhlobo nokuphila komuntu siqu.
Yebo, wonke umuntu uyazi ngezinga lakhe lokukhanyisa nokulinganisa njengoba umdlali. Kodwa-ke, bambalwa kuphela abathinta i-Biography ye-Divock Origi okuyinto ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
I-Divock Origi Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala I-Divock Okoth Origi wazalwa ngosuku lwe-18th ka-Ephreli 1995 e-Ostend eBelgium. Wayengowesibili kwezingane ezintathu ezazalwa ngonina, uLinda Adhiambo noyise, uMike Origi.
Abazali base-Origi yizizwe ezinothando ezithandwayo zezemidlalo zaseKenya ezamyisa emhlabeni ngesikhathi uyise edlala imidlalo yezemidlalo KV Oostende enkulumweni yasePelgium. Ngakho-ke u-Origi wakhuliswa eMasipala waseBelgium waseHouthalen-Oost lapho akhula khona nodadewabo omdala uNatasha nodadewabo omncane uDeneen.
Ngesikhathi ekhula eHouthalen-Oost, isizwe saseBelgium neKenya sohlanga olumnyama nezimpande zakwaKenya-uLuo, saba yi-apple engazange iwele kude nesihlahla ngokubonisa imiklamo yebhola lebhola.
"Amathikithi asebevele esesendlini ngokushesha nje lapho eqala ukuhamba. Wayevame ukuwakhahlela endlini nasegadini. "
Ukhumbule uMike wezintandokazi zethandodana yakhe ebusweni.
I-Divock Origi Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Umsebenzi we-Buildup
Akubanga nje isikhathi eside ngaphambi kokuba i-football prodigy ibhalise ohlelweni lwebusha lwethimba le-ligi lesifundazwe saseBelgium, I-KFC De Zwaluw Wiemesmeer ngenkathi eneminyaka engu-5 ubudala.
"... futhi Kusukela eneminyaka eyisithupha ubudala, wayesevele ene talenta futhi wayemude futhi enamandla kunezinye izingane."
Uphawula uMike wokukhula okuqhubekayo okuncane kwe-Origi.
Iziteleka zebhola lezinsizwa ezishaya phambili zambona u-Origi athuthela emaqenjini aseBelgium, uKRC Harelbeke nakamuva ku-KRC Genk lapho ubaba wakhe enezikhundla zobuchwepheshe. Kwakuyizinhlelo zobusha ze-KRC Genk ukuthi u-Origi wabhala ukukhula okukhulu kwebhola elihambisana nabafundi e-Park Houthalen Primary School naseSint-Jan Berchmans College.
"Futhi lapho umbiko wakhe wesikole uzofika, ngizobona imibono yabothisha ukuthi ubhekene nebhola nokuthi uyena ohamba phambili phakathi kwabalingani bakhe".
I-Divock Origi Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Road To Fame
Kuyaphawuleka ukuphawula ukuthi u-Origi wayenomsebenzi omkhulu osemusha wakhe eKRC Genk lapho eqeqeshwa khona iminyaka engu-9 ngaphambi kokuya eLille eFrance eliseduze eneminyaka engu-15. Ngesikhathi eseLille, u-Origi wabeka imibukiso emihle eyenza abantu baseLiverpool baqaphele.
Uhlangothi lwaseNgilandi aludingeki luthole ukuthi u-Origi uzobanika ithuba elihle ngemali yabo ngemuva kokumbuka ethi uthumele ithimba likazwelonke laseBelgium ngezinyathelo zokugqekeza zeNdebe Yomhlaba ye-2014 ngokubeka umgomo wakhe wokuqala emhlabeni wonke ngomzuzu we-87th 1-0 ukunqoba I-Russia.
Ekugcineni wanikezwa inkontileka yeminyaka eyisithupha yiNgxenyana yaseNgilandi ngo-29th of July 2014 ngemali eyi-10 Million amapounds futhi ngokushesha wabuyiselwa eLille ukuthola ulwazi oluningi ngeqembu lokuqala.
I-Divock Origi Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Ukuphakama Ekudumeni
U-Origi uthole isipiliyoni esidingeka kakhulu esidlala uLille ngesikhala sakhe sokuboleka esikhwameni se-2014-2015. Ekugcineni wajoyina iLiverpool ngenkathi elandelayo ngemuva kokwenza izinhlamvu ze-44 nokukhipha imigomo ye-9 yeLille.
U-Origi wenza u-Liverpool ibhola lakhe njengomdlali esikhundleni sakhe ebusweni bukaManchester United. Kungakapheli sikhathi, wahola imigomo yakhe yokuncintisana yokuqala yeLiverpool ngokudonsela i-hat in the Liverpool sika 6-1 ukunqoba iSouthampton.
I-Divock Origi Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Ubudlelwano
Kubekho amarekhodi obudlelwane obudlule buka-Origi noma umlando wokuphola. Azikho izixhumanisi ezikhona nobuhlobo bakhe bamanje. Lokhu kuphelela ekutheni phambili phambili ukhathazekile ngokuthatha umsebenzi wakhe ezindaweni eziphakeme.
Noma kunjalo, u-Origi unalokho okudingekayo ukuze enze isoka noma umyeni othakazelisayo unikezwe izici zokuqondisa nokugxila kulo mdlalo webhola.
I-Divock Origi Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Ukuphila Komndeni
UDivock Origi wazalelwa emndenini onothando wezemidlalo. Sikulethela imininingwane eyinhloko mayelana nomndeni wakhe osondelene naye.
Mayelana noyise ka-Origi: UMike Okoth Origi nguye obaba phambili. Wazalwa ngo-16th kaNovemba 1967 eNairobi eKenya. Ngokungafani nendodana yakhe, uMike waqala njengomgcini wegagasi owaphenduka iStriker for Shabana eKenya Super League. Kamuva wathola ukuthuthela eBelgium club, uKV Oostende ku-1992 naseminyakeni ye-3 kamuva, wamukela ukuzalwa komfana wakhe wokuqala kanye nengane yesibili uDivock.
Ukholelwa ukuthi ungumdlali wokuqala wezemidlalo waseKenya ukudlala eYurophu, uMike ubelokhu engumzali futhi efundisa indodana yakhe eyamhlonipha ngokuzinikela kwakhe kwebhola.
"Ngesikhathi ngisemncane Ngangibona ubaba wami enesiyalo esikhulu nasenqoleni lapho enikeza yonke into emdlalweni, umdlalo uzohlala uhlinzeka okuthile."
Uthi uDivock wayethonya likayise.
UDivock osemncane noyise uMike
Ubaba nendodana balondoloza ubuhlobo obuseduze kakhulu noMike bebeke ukubonakala okusekelayo emidlalweni eminingi yeDivock ukuze bamjabulise.
Mayelana nomama ka-Origi: ULinda Adhiambo ungumama ka-Origi. Njengomyeni wakhe, uLinda usondelene nendodana yakhe yedwa ozoqamba ama heroic kanye nabahle abenza ukuthi avele phakathi kwamantombazane aseKenya naseBelgium.
Mayelana no-Origi's Siblings: Abantwana baka-Origi bahlanganisa uNatasha noDeneen. UNatasha nguye ongowokuqala wabantwana bakithi. Wakhula no-Origi owabelana naye ngezinhloso zakhe zebhola. Unayo indodakazi - uMaliya ongumshana ka-Origi. UDeneen, ngakolunye uhlangothi, udadewabo omncane ka-Origi nomunye wabalandeli bakhe abakhulu.
Kwesobunxele Kwesokudla: Ubaba kaDivock uMike, udade osemncane - uDeneen, udade osekhulile -Natasha nendodakazi kaMaliya, unina kaDivock uLinda noDivock.
Mayelana nobuhlobo buka-Origi: Ukusuka ebuhlotsheni obuseduze buka-Origi bangabalume bakhe u-Austin, uGerald no-Anthony abadlala ibhola lezemidlalo emazweni ahlukene. UDivock unomzala wakhe u-Arnold Origi odlala ibhola lezemidlalo njengomdlali weLillestrom neqembu laseKenya.
I-Divock Origi Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Amaqiniso angeke asebenze
UDivock uyisidlali sokuqala somsakazo waseKenya ukushaya amaphuzu emcimbini weNdebe yoMhlaba.
I-dolphin yomntwana yayibhalwe "Origi" eBoudewijn Seapark eBruges. Ukuthuthukiswa kwafika ngemuva komgomo we-88th owodwa weDivock wathumela ithimba likazwelonke laseBelgium ngezinyathelo zokungqongqoza zeNdebe Yomhlaba ye-2014, ngo-1-0 ukunqoba eRussia. Ngokudabukisayo i-Dolphin ayizange iphile isikhathi eside njengoba kuthiwa yafa izinsuku kamuva.
I-Divock Origi Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Amaqiniso okuphila komuntu siqu
UDivock Origi uthandwa yizizwe ezimbili zaseKenya naseBelgium naphezu kokungafani nalokho okwakungenzeka emlandweni wamanye amazwe. Noma kunjalo, wenza amaKenya ngokukhuluma ulimi lwesiSwahili ngendlela elula.
Ubuye akhulume iFlemish, ulimi ayelifunde ngenkathi ekhula e-Ostend futhi enomyalo omuhle weDashi. U-Divock uthanda umndeni, ibhola lezinyawo futhi unesithakazelo ekucwaningweni kwengqondo, ikakhulukazi izinyathelo ezisebenzayo zobuchopho bomuntu nokuthi zihlobene kanjani nezinhlobo ezahlukene zobuntu.
I-Divock Origi Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts -Indlela yokuphila
Kubikwa ukuthi uDivock unendlu ebiza u-$ 1 Million eBelgium. Ukuqoqwa kwezimoto zakhe kubonisa imikhiqizo efana ne-Audi, Ford kanye ne-mini Cooper eyayiqhuba ukuqeqesha.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iDivock Origi Ingane Yethu Indaba kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
Ilazi lebhola lebhola le-Lille OSC
UNicolas Pepe Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka
UJoel Matip Indaba Yobuntwana Plus Untold Biography Facts
I-Diogo Jota Ingane Yomlando Indaba Plus Untold Biography Facts
I-Dejan Lovren Ingane Yenkundla Plus I-Untold Biography Facts
I-Florian Thauvin Ingane Yendaba Yengane Plus Untold Biography Facts
I-Jordan Henderson Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
U-Rafa Benitez Childhood Story Plus
Benjamin Pavard Childhood Story Plus Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka